Guddiga amniga ee golaha shacabka oo la kulmay wasiirka amniga gudaha | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddiga amniga ee golaha shacabka oo la kulmay wasiirka amniga gudaha
Guddiga amniga ee golaha shacabka oo la kulmay wasiirka amniga gudaha
Muqdisho(SONNA)-Ujeedada kulanka ayaa aheyd in guddiga golaha shacabka u qaabilsan arrimaha amniga ay su’aalo weydiiyaan wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska, kaas oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Kulan ayaa waxaa ka qeybgalay xubnaha guddiga iyo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo taliyaha ciidanka booliiska Janaraal C/xakiim Daahir Saciid Saacid iyo saraakiil kale oo laamaha amniga ka tirsan.
Xoghayaha guud ee golaha shacabka, C/Kariin Xaaji Cabdi Buux, oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in guddiga amniga u qaabilsan golaha shacabka u yeereen wasiirka iyo taliyaha booliiska si wax looga weydiiyo amniga ammaanka dalka quseeya gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Kulankn ayaa waxaa uu xiritaan ama gabagebo u ahaa kulamo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho oo amniga uun looga hadlayay.
Next articleR/wasaaraha Bangaladesh oo sheegtay in ay naftooda u hurayaan Muslimiinta Rohingya